Chhaharaa | ब्राह्मणहरुले यसरी सुरु गरे झुठको खेती
Mother Tongue लाई आत्मसात गरौ
प्रचण्डको चितवनको भाषणले रेनुले चुनाव हार्ने!
१६ दिने एआईजी बढुवा सिफारिस
पहिचानको चार आधार नेताहरुका खल्तिमा
स्थानीय तहका सेवाग्राही मर्कामा
गठबन्धनले महिला उम्मेदवार घटे
गफ होइन काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोजौं
आत्मनिर्णयसहितको स्वशासन समयको माग
सशस्त्रमा दुई डिआईजी एकैसाथ बढुवा
देशमा रंगीविरंगी गठबन्धन देखियो
राज्यको पुर्नसंरचना ओझेलमा
गठबन्धनको सिट बाँडफाँडप्रति माधव समूहको असन्तुष्टि
ब्राह्मणहरुले यसरी सुरु गरे झुठको खेती
माइकल वामशादको डिएनए अनुसन्धानको विषयलाई लिएर “टाइम्स अफ इण्डिया”ले सन् २००१ मे २१ तारेखमा प्रकाशन हुँदा इण्डियाभर त्यो खबरले तहल्कै मच्यायो । आनुवांशिकता अनुसन्धान अनुसार तमाम महिलाहरुको डिएनए एक अर्कामा कुनै भिन्नता थिएन तर युरोशियन पुरुषहरुको डिएनए इण्डियन मूलनिवासीहरुसँग पटक्कै मेल खाइरहेको थिएन । त्यसकारण युरोशियन आक्रमकहरु आफू आउँदा उनीहरुले आफ्नो साथमा महिलाहरु नलिई आएका थिए । युरोशियनहरुले इण्डियन महिलाहरुमार्फत सन्तान जन्माएका थिए । इण्डियन मूलनिवासीहरुको डिएनए भिन्दै भएकोले कथित उच्च जातिका ब्राह्मणहरुले सबैलाई शुद्र र अति शुद्र वर्गमा राखेर आफूहरु विदेशी भए पनि श्रेष्ठ जातिका ब्राह्मण भएको कारणले युरोशियन डिएनए लुकाउने प्रपन्च रचे । त्यो अनुसार वर्णव्यवस्था तथा जातिव्यवस्थाका ब्राह्मणहरुले सुरुवात
गरे । त्यसैबेला वामशाद र “भारत मुक्ति मोर्चा”को अध्यक्ष माननीय वामन मेश्रमले पुरा इण्डियाभरीका ब्राह्मणहरु विदेशी हुन भनेर, जनजागृतिको कार्यक्रम सुरु गरे । जसले देशभर मात्र होइन विश्वमा चर्चा पायो । यसको डरले विदेशी ब्राह्मणहरुले धाँधलीपूर्ण इभिएम चुनावमा बहुजन नेतृत्वको अन्त गरिदियो ।
सबै पोल खुल्दै जान थालेपछि, त्यसको विरुद्धमा षडयन्त्रकारी ब्राह्मणहरुले तुरुन्त नीति बदलेर आर्य शब्दको सहारामा आफूहरु मूलनिवासी नै हौ भनेर झुटको खेती गर्न पछि लागे । तर आर्य शब्द स्थानीय मूलनिवासी बौद्ध धर्मावलम्विहरुको शब्द थियो । पाली भाषामा “अरिय”को अर्थ श्रेष्ठ वा प्रतिष्ठित भन्ने बुझिन्छ । बौद्ध धर्म अति श्रेष्ठ भएकोले यो धर्मलाई आर्य–धर्म भनिएको थियो । बौद्ध धर्ममा आष्टांगिक मार्गको आर्य–आष्टांगिक मार्ग भनियो । डा.वावासाहव आंवेडकरलाई थाहा थियो की, आर्य शब्द इण्डियन बौद्धहरुको शब्द हो । त्यसैले ब्राह्मणहरु विदेशी हुन भन्ने कुरामा उनी ढुक्क थिए । जसरी फ्रेन्चहरु ब्रिटिशहरुको लागि विदेशी हुन त्यसरी नै तमाम ब्राह्मणहरु इण्डियन मूलवासीहरुको लागि विदेशी हुन भनेर डा.वावासाहव अम्बेडकर छाती ठोकेर भन्थे ।
आफूलाई मूलनिवासी प्रमाणित गर्न, ब्राह्मणहरुले एउटा कपोकल्पित भ्रम तयार गरे । ब्राह्मणहरुको पुर्खा पहिला इण्डियाबाट युरोपतिर गएका थिए फेरी पछि युरोपबाट इण्डिया वापस आएका हुन भनेर तर डिएनए अनुसन्धानले सावित भैसकेको थियो की, इण्डिया देखि उत्तर–पश्चिम दिशातिर कोही गएकै थिएन । बरु उत्तर–पश्चिम युरोशियाबाट स्टेप समुदाय इण्डिया आएर उनीहरुले आफूलाई स्वकथित ब्राह्मण जातिमा स्थापित हुन सफल भए ।
ब्राह्मणहरु झुट्टो र काल्पनिक भ्रम फैलाउन कति माहिर हुन्छन् भन्ने कुरा इण्डियाको सत्य इतिहास दबाउनको लागि यिनीहरुले वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, पुराण वा उपपुराण लेखेर काल्पनिक र झुट्टा इतिहास मूलनिवासी समक्ष सजिव बनाएबाट सिद्ध हुन्छ । यी सबै भ्रमपूर्ण इतिहास मूलनिवासी माथि छाप पार्न प्रत्येक वर्ष नबिराई रामलिला, रावणदहन जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर मूलनिवासीहरुको दिमागमा भ्रम सृजना गर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । तर यो २०औं शताब्दिमा ब्राह्मणहरुले मिथ्या गफ गर्दैमा सफल हुनेवाला छैनन् । मध्ययुगिन कालमा मूलनिवासी बहुजनहरुलाई शिक्षादेखि बन्चित गराएर अशिक्षित राख्नाले उनीहरु ब्राह्मणहरुको पुराणको कथामा ज्यादै भरोसा गर्थे । त्यस्तै मूलनिवासीहरुको पहुँच सोशल मिडिया र देशव्यापी रुपमा संगठन नभएकोले ब्राह्मणहरुको किम्वदन्तिकोे विरुद्धमा आवाज उठाउन सकिरहेको थिएनन् । अब हालत बद्लिदै गर्दा मूलनिवासी इण्डियनहरुको आफ्नै सोशल मिडिया त्यस्तै भारत मुक्ति मोर्चा जस्तो देशव्यापी एवं अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु तयार पारेका छन् । जसले ब्राह्मणहरुको हरेक कपोकल्पित क्रिया प्रक्रियाहरुको पर्दाफास गरिरहेको छ ।
प्रथम पटक विदेशी होइनौ भनेर, प्रमाणित गर्नको लागि ब्राह्मणहरुले डिएनए अनुसन्धानको सहारा लिए । यसको लागि उनीहरुले राखीगढी(हरियाना)मा प्राप्त कंकालको साहारा लिने निश्चय गरे । यो योजना पुरा गर्नको लागि उनीहरुले राखीगढीमा उत्खनन् गर्ने टिमको प्रमुखमा प्रो.शिंदेलाई खटाए । संसारकै नामुद वैज्ञानिकहरुले सामुहिक रुपमा विश्वव्यापी स्तरमा डिएनए अनुसन्धान गरेर त्यो रिपोर्ट सन् २०१८ मार्चको ३१ तारेखको दिन प्रकाशित गर्दा इण्डियाको ब्राह्मणहरु युरोशियन स्टेप(ब्लाक सीको पासको प्रदेश)बाट आएको भनेर प्रष्ट खुल्न आयो । माथिबाट खटाइएको टिमले नगरेको र कुनै जर्नलमा पनि प्रकाशन नभएकोले र रिपोर्ट अनलाइनमा मात्र प्रकाशन भएको निहुमा ब्राह्मणहरुले त्यो रिपोर्ट मान्न तयार भएनन् । त्यसपछि संसारभरिको नामी ११७ विशेषज्ञहरु र डेभिड रिच, पिटरसन जस्ता दुनियाको नामुद विशेषज्ञहरु लगायतका समुहले अनुसन्धान गर्ने काम सुरुभयो । इण्डियाको शिंदे र राय पनि(९२ र ११७ को दुवै टिममा दुवैजना थिए) शरिक गराइएको थियो । यी विशेषज्ञहरुले अगाडीको विशेषज्ञहरुसँग् समिक्षा गराइएको थियो । यी विशेषज्ञहरुले अगाडीको विशेषज्ञहरुसँग समिक्षा गरेर दुनियामै मानिएको सायंटिफिक जर्नल “नेचर”मा सन् २०१५ सेप्टेम्बर ६ तारेखमा प्रकाशन गरियो । रिपोर्टमा ग्राफ निष्कर्ष प्रकाशन भएको थियो की “इण्डियाको ब्राह्मणहरुको मल उदय युरोशियन स्टेप प्रदेश हो ।” वहाँबाट युरोशियन आक्रमणकारीहरु द्यऋ द्धण्ण्ण् पछि(४००० वर्ष पहिले) इण्डियातिर आएका थिए र उनीहरुले द्यऋ द्दण्ण्ण् देखि ज्ञछण्ण् सम्ममा उच्चकोटीको विकसित ‘सिंधु’ सभ्यताको नष्ट गरिदिए । विश्वकै नामी विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ताहरुले ब्राह्मणहरुको विदेशीपनको बारेमा डिएनएको प्रमाण(सवुत) दिए पछि ब्राह्मणहरुको मुखमा बुचो लाग्न गएको थियो । र पनि षड्यन्त्रकारी ब्राह्मणहरु कहिले पनि आफुलाई बदल्नेवाला थिएनन् किनभने उनीहरुको अनुवांशिकता नै झुठ जालसाजी युक्त पृष्ठभूमिबाट आएको हो । यिनीहरु इण्डियाको लागि विदेशी नभएको प्रमाणित गर्नका लागि ब्राह्मणहरुले प्रो.शिंदेको सहयोग लिएर सन् २०१९ सेप्टेम्बरको ६ तारेखमा “सेल” जर्नलमा राखिगढीको डिएनएको रिपोर्ट प्रकाशन गराए । त्यो अनुसन्धानमा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरु पनि सामेल भएकोले प्रा.शिंदेले त्यहाँ एक शब्द पनि बदल्न पाएनन् । राखीगढी डिएनए अनुसन्धानमा सम्मति व्यक्त गरियो की, राखिगढीको कंकाल महिलाको हो र द्यऋ द्धटण्ण्(करिब ४६०० वर्ष पहिलाको) हो र इण्डियामा ब्राह्मणहरु द्यऋ द्धण्ण्ण् पछि(करिब ४००० वर्षपछि) मात्र आएकोले राखीगढीमा पाइएको महिलाको कंकाल जीवित भएको समयमा ब्राह्मणहरु युरोशियाबाट इण्डियामा आएकै थिएनन् । वास्तवमा महिलाको मृत्युको ६०० वर्ष पश्चात युरोशियनहरु इण्डिया आइपुगेका थिए । महिला र उनका समकालीन सिंधु सभ्यताको युरोशियन स्टेप प्रदेशको ब्राह्मणहरुको पुर्खासँग कुनै सम्बन्ध थिएन । यहीकारणले राखीगढीको डिएनए रिपोर्टमा ब्राह्मणहरुको डिएनएसँग कुनै मेल खान सकेन । तर यही सुत्र पक्रेर यस्तो खबर फैलाए की, राखीगढीको कंकालबाट प्राप्त डिएनएमा ब्राह्मणहरुको डिएनए प्राप्त हुन सकेन, यसको अर्थ यो हो की, ब्राह्मणहरु इण्डियामा बाहिरबाट आएका होइनन्, तथापी उनीहरु इण्डियाको मूलनिवासी हुन् ।
सत्य त यो हो की, ब्राह्मणहरु त्यसबेला(द्यऋ द्दटण्ण्मा) इण्डिया आइपुगेकै थिएनन्, त्यसैले तिनीहरुको डिएनए उक्त कंकालमा कसरी देखा पर्छ त ? र यसले उनीहरु इण्डियाको मूलनिवासी हुन भनेर कसरी सावित हुन्छ ? दुनियाभरको विशेषज्ञहरुको ९२ एवं ११७ सामुहिक टिमले(सन् २०१८ मार्च ३१ र २०१९ सेप्टेम्बर ६ को रिपोर्ट) स्पष्ट रिपोर्टमा दिएको छ की, इडिया माथि युरोशियन स्टेपहरुको आक्रमण द्यऋ द्धण्ण्ण् देखि ज्ञछण्ण् को समयमा (करिब ४००० वर्ष देखि १५०० भित्र) भएको थियो । त्यसैले वर्तमान इण्डियाको ब्राह्मणहरुमा युरोशियन स्टेप समुदायको आनुवांशिकता प्राप्त
हुन्छ । यथार्थमा राखीगढीको कंकाल सिंधुकालीन मूलनिवासीको थियो र तरपनि रिपोर्टको ब्राह्मणहरुले झुट्ठो निष्कर्ष निकालेर अफवाहा फैलाए । उनीहरुले मिडियाहरु प्रयोग गरेर “आर्य इण्डियन नै हो” यो शिर्षकमा इण्डियाभरी झुट्टो रिपोर्ट
फैलाए । प्रो.शिंदेले पनि प्रकाशित रिपोर्टको विषयमा मिडियासँग उल्टासिधा अभिव्यक्ति दिनु थाले पछि देशव्यापी संगठन “भारतमुक्ति मोर्चा”ले अदालत मार्फत अदालतमा हाजीर पुर्जि जारी गराए पछि मात्र शिंदेको मुख बन्द भएको थियो ।
निश्चित पनि “झुठो तर दावाको साथ बोल्न सक्ने” क्षमतामा विदेशी ब्राह्मणहरु माहिर हुन्छन् । समय समयमा परिस्थिति अनुसार रणनीति बद्लेर षडयन्त्र गर्ने, झुठो बोल्ने उनीहरुको स्वभावले गर्दा तिनीहरु विदेशी भएको सावित हुन्छ । ब्राह्मणहरु इण्डियामा विदेशी हुन भनेर जग प्रशिद्ध भैसकेको छ । विदेशी समुदायहरु दोस्रो राष्ट्रमा गएर त्यहाँको मूलनिवासीहरुमाथि राज गर्न उनीहरुलाई शोषण गर्न या उनीहरु विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न हक कदापी कसैमा हुँदैन र पनि विगत चा हजार वर्ष यतादेखि विदेशीपनको मनोभावको कारणले इण्डियन रैथानेवासीमाथि अत्याचार गर्दै राज
गरिरहेछन् । सन् १९९३ को संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्र अनुसार कुनै पनि विदेशीहरुलाई मूलनिवासीमाथि यसरी राज गर्ने अधिकार छैन । तर ब्राह्मणहरु विदेशी भएर पनि राज गरिरहेछन् । यो विषयमा इण्डियाको मूलनिवासीहरुले अलिकति पनि छनक पाएका छ्रैनन । यस विषयमा पूर्ण जानकारी दिएर मूलनिवासीहरुलाई चाडै जागरुक बनाएर “भारत मुक्ति मोर्चा” जस्तो देशव्यापी संगठन मार्फत एकजुट भई विदेशी ब्राह्मणहरुको जालझेलबाट मुक्ति हुन अति आवश्इक
छ । र जागरुक गर्नु, गराउनु ढिला भइसकेको छ ।
सन्दर्भः डा.प्रताप चाटसे
(विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि युरोशिया)